Starbucks Coupon Fraud: Gini mere ị gaghị achọ koodu? | Martech Zone
Starbucks Coupon Fraud: Gini mere ị gaghị achọ koodu?
Thursday, August 31, 2006 Thursday, August 31, 2006 Douglas Karr
Seth si blog nwere ihe edetu banyere kuki na-emezighị emezi edozi na Starbucks. N'iburu ogo nke Starbuck, aghọtaghị m ihe kpatara na ha etinyeghị usoro coupon na barcoding. Nke a bụ teknụzụ dị oke ọnụ ma dịkwa ọnụ ala… ọ na-achọ nkwado na kọmpụta Ọrụ kọmputa.
Olee otú ị pụrụ isi mee nke a? Imirikiti ndị na-ere sọftụwia email na-ekwe ka itinye eriri (ma ọ bụrụ na ha emeghị, gaa na Kpọmkwem Ngwaọrụ). Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịgafe eriri na ụzọ oyiyi. Eriri gafere n'oge email mepere n'ezie na-ewulite koodu ahụ nke ọma, yabụ Starbucks nwere ike zoro ezo ụdị koodu coupon - nke pụrụ iche na onye debanyere aha - ma wepụta ya dị ka akara ngosi.
Mgbe agbapụtara ya, onye ahụ na-ego ego nwere ike nyochaa email ya na akara ngosi ya. A na-elele uru ahụ n'ime sistemụ wee nyochaa maka izi ezi na mgbapụta. Na mgbakwunye, mgbapụta nke dere nwere ike ịdenye aha ya na Adreesị Email ahụ n'ezie - na-enye ndị na-ere ahịa ụfọdụ ozi bara uru banyere onye gbapụtara dere, oge ole o were, ebe ha gbapụtara ya, wdg. Nke a bụ data dị ike! N'ezie, ozi ga-abụ nnukwu akụ n'okporo ụzọ!
Site na ụfọdụ na teknụzụ dị na shelf na ụfọdụ atụmatụ dị mfe, Starbucks nwere ike ịchekwaara onwe ha ihe ihere ahụ.
Egwu abughi atumatu
Blọọgụ & Ifuru: Mkpụrụ, Igbo, Pollinate na Too
Ọgọstụ 31, 2006 na 8:55 ehihie
Echiche gị dị mma. M na-eche ihe Starbuck IT ụmụ okorobịa na-eme?